यसरी महँगियो इन्धन : ८३ रूपैयाँको पेट्रोलमा ५७ रूपैयाँ कर ! - नेपाल आवाज
यसरी महँगियो इन्धन : ८३ रूपैयाँको पेट्रोलमा ५७ रूपैयाँ कर !
नेपाल आवाज २६ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ०८:१३ मा प्रकाशित २०५ पाठक संख्या
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेपछि भाउ घटाउन चौतर्फी दबाब छ। इन्धनको मूल्य किन बढ्यो रु आम सर्वसाधारणको बुझाइमा निगमले सञ्चालन खर्च र नाफा धेरै राखेका कारण मूल्य वृद्धि भएको हो। वास्तविकता भने फरक छ।